African Tourism Board inosimudzira kusimudzira kwekubatana kwekushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » African Tourism Board inosimudzira kusimudzira kwekubatana kwekushanya
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Nigeria Breaking News • Zimbabwe Breaking News • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
tanzanian high commissioner kuNigeria dr benson bana
Tichitarisa kusimudzira Africa senzvimbo yekushanya yesarudzo munyika, iyo African Tourism Bhodhi (ATB) iri kushanda pamwe neSouth Africa, Tanzania, neNigeria kusimudzira, kushambadza, uye kusimudzira kushanya munzvimbo dzino shanya dzeAfrica.
Mumiriri weAfrican Tourism Board muNigeria, Abigail Olagbaye, anga asangana navo ndokuzoita hurukuro nevamiriri vemakomisheni nevamiriri venyika. Nigeria neTanzania pane rakakosha basa rekusimudzira kushanya pakati peNigeria kuWest Africa neTanzania kuEast Africa.
Pamwe chete nasachigaro weATB, VaCuthbert Ncube, Amai Abigail vakashanya ndokuzopanana mazano neNigerian High Commissioner kuTanzania, Dr. Sahabi Isa Gada, pamwe nevakuru vakuru nevamiriri vemuSouth Africa High Commission muTanzania.
Vatungamiriri vaviri veATB vakaita hurukuro dzakanangana nekusimudzira kwekushanya pakati peSouth Africa, Tanzania, Nigeria, pamwe neAfrica yese.
Vaviri Sachigaro weATB uye Mumiriri weBhodi muNigeria vaive kuTanzania mwedzi wapfuura kune rwendo rwekushanda rwakanga rwakwezvawo Chief Executive Officer (CEO) weATB Doris Woerfel.
NeChipiri svondo rino, Amai Abigail vakashanya kune vekuTanzania High Commission kuNigeria uye nhaurirano yemhando yepamusoro naDr. Benson Bana, Commissioner mutsva weTanzania kuNigeria, pamwe naVaElias Nwandobo, uye Chipangamazano kuMission.
Mumiriri weATB muNigeria akakurukura nevamiriri veTanzania nezve kusimudzira nekufambisa zvigadzirwa zvekushanya zveNigeria neTanzania.
Chikamu chezvirevo zvakatarwa yaive yakarongwa yeTanzania neNigeria Yekufamba Svondo 2020. Idzi nyika mbiri dzeAfrica dzinozivikanwa nemhuka dzesango, tsika dzakapfuma dzeAfrica, uye nhoroondo dzevashanyi.
Tanzania inozivikanwa nembama yemusango safaris, Mount Kilimanjaro, uye inodziya Indian Ocean mahombekombe muZanzibar. Naijeriya ndiyo nyika hurusa mu Africa, yakapfuma netsika dzakasiyana uye nhoroondo. Naijeriya irwo nyika inotungamira muAfrica, yakapfuma netsika dzemuAfrica, kunyanya zvinyorwa zvemuAfrica izvo kondinendi yanga ichitengesa muEurope neNorth America, ichikwevera vadzidzi vanoverengeka kuti vashanyire nyika ino yeAfrica kumisangano yekudzidzisa.
Sangano rakarongwa reTanzania neNigeria Rekufambisa rinotarisirwa kukwezva vashanyi, vashanyi, vatambi, vatengesi, vezvenhau, uye vashanyi, pakati pevamwe vanoita zvekushanya pakufamba.
"The Tanzania High Commission muNigeria neAfrican Tourism Board vanotarisira zvikuru mibairo yeiyi kudyidzana kune zvibereko uye mibairo yakanaka yainoratidza kune nyika ne Africa yose," Muzvare Abigail vakataurwa mumashoko avo eFN.
Yakagadzwa nechiono chekubatanidza nekubatanidza Africa senzvimbo imwe chete, ATB iri kutarisa kuona vanhu vanobva kuNigeria neSouth Africa vachishanyira kuTanzania vachichinjana nevashanyi veTanzania, zvakare zvizvarwa kubva kumarudzi eAfrica kushanyira dzimwe nyika muAfrica.
African Tourism Board isangano rinozivikanwa pasi rese nekuita sechinhu chinobatsira mukusimudzira kwekufamba nekushanya kuenda, kubva, uye mukati medunhu reAfrica. Kuti uwane rumwe ruzivo uye maitiro ekubatana, shanya africantourismism.com .